Vedio: Ururka Xamaas oo Gacanta Ku Dhigay Jaasuus Magaalada Ghaza Ku Dilay Hoggaamiye Maazin Fuqahaa.
Friday May 12, 2017 - 09:24:31 in Wararka by Super Admin
Dhaq dhaqaaqa wax iska caabinta islaamiga Xamaas ee ka dagaallama dhulalka Filasdiin ee gumeysiga kujira ayaa ku dhawaaqay in ay gacanta ku dhigeen Jaasuus wada shaqeyn lalahaa Yahuudda Sahyuuniyadda.
Ismaaciil Haniya Madaxa xafiiska Siyaasadda Ururka Xamaas ayaa sheegay in laamaha ammaanka magaalada Ghaza ay soo qabteen Jaajuus khaa’in ah oo 24,March,2017 toogasho ku dilay Hoggaamiya Maazin Fuqahaa oo kamid ahaa mas’uuliyiinta Xarakada.
Xamaas ayaa sheegtay in dilkaasi uu fuliyay Jaasuus Filasdiini ah kana mid ahaa dhalinyarada magaalada Ghaza balse baaritaanno bilo qaatay kadib gacanta lagusoo dhigay Jaasuuska iyo Unug Sirdoon oo Yahuuddu ka dhistay magaalada Ghaza.
Ismaaciil Haniya wuxuu sheegay in howlgallo her iyo habeen ah oo ay fuliyeen laamaha amniga ugu dambeyn ay ku guuleysteen soo qabashada Jaasuuskii dilay Maazi wuxuuna ballan qaaday in maalmaha soo socda ay qisaasi doonaan oo ay dilayaan.
Katiibada Cizudiin Al-qassaam oo ah garabka melleteri ee Xamaas ayaa iyana ballan qaaday in ay soo bandhigi doonto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Jaajuuska gacanta lagu dhigay iyo ku lug lahaashiyaha Yahuudda ee dilka Hoggaamiye Fuqahaa.
Hoos Ka Daawo ismaaciil Haniya oo iclaaminaya warka Jaasuuska ama halkan ka degso